Sare: 6 Tiknoolojiyada Local SEO ee Ganacsiga yaryar
Waa ganacsade yar oo ganacsade ah si uu Google u ogaado halka uu ganacsigu deggan yahay, iyo waxa ay bixiso. Waxay ku xirantahay caawinta shirkadu ka muuqato mashiinka raadinta bogagga darajada, iyo sidoo kale kor u qaadista aragtida dadka dhagaystayaasha ah ee aaggaas. Waxaa loo yaqaan 'optimization SEO', oo waxay noqon kartaa mawduuc aad u jahawareer leh gaar ahaan barashada qaabka Pigeon algorithm by Google. Waxay fududeyneysaa in la fahmo qodobada rikoorka ah ee ka caawin doona degaanka adeegyada SEO .
Ivan Konovalov, khabiir ka socda Semt , wuxuu qeexayaa waxa ay tahay in lagu daro ujeeddooyinkooda SEO-ga.
1 - smb service provider. Abuuri Meelaha Goob Joogta ah
Wuxuu hubiyaa in mulkiilaha uu leeyahay bog ganacsi maxaliga ah oo loogu talagalay saddexda makiinada raadinta ee ugu sareeya. Guud ahaan, waxaa jira saddex liisto iyo kashaqeeyn guud ahaan si loo maareeyo. Dhammaan waxay ubaahan tahay inay sameeyaan waa inay buuxiyaan dhamaan macluumaadka ku saabsan ganacsiga, taasna waxay noqon doontaa dhammaan koontada.
2. Kala soocaan oo ku calaamadee bogga saxda ah
Wax-ka-qabashada waxaa ka mid ah in lagu dhejiyo sawiro tayo sare leh, faahfaahinta saacadaha shaqada, iyo liiska dhamaan adeegyada la heli karo. Qeybinta, dhanka kale, waa in laga caawiyo makiinadaha raadinta raadiyo waxa ganacsigu sameeyo. Waa inay bixiyaan 2-5 qaybood si ay kuugu siiyaan awoodda aad ku geli karto ganacsigaaga midkood. Makiinadaha raadinta waxay u muuqdaan kuwo aan soo bandhigin ganacsiyo aan kala sooc lahayn ama aan si khalad ah u sooceynin..
3. Xaqiiqooyin ganacsi oo sax ah
Mar walba hubi in NAP (Magaca, Cinwaanka, Telefoonka) faahfaahinta shirkadu ay ku socoto dhammaan liistooyinka ku saabsan makiinadaha raadinta. Waxaa jira fursad weyn oo ganacsi horeba loo taxay meel qof kale. Dhamaantood waxay ubaahanyihiin inay sameeyaan waa inay sheegaan in liisaska la iska ilaaliyo khilaafyada. Diidmada rafcaanka waxay u baahan tahay mulkiilaha in uu sameeyo cilmi baaris ku saabsan haddii uu jiro ganacsi kale oo leh isla magaca iyo goobta. Sii wad inaad hubiso lahaanshaha adoo adeegsanaya habab suurta gal ah. Isticmaal khayraadka sida Yext ama Localize, ama Google MapMaker si loo xoojiyo hannaanka.
4. Faallooyinka Online
Google sidoo kale wuxuu eegaa dib u eegista internetka si uu u barbar dhigo websiteka. Si kastaba ha ahaatee, waa macaamiisha oo kaliya inay eegaan bogga bogga natiijooyinka raadinta ee dib u eegista. Qiimeeyayaasha ayaa go'aan ka gaaraya haddii martida ay doonayaan in ay isku xiraan link ama aan. Mid ka mid ah ayaa si fudud ugu dari kara badhanka "dib u eegista boostada" bogga intarnetka si uu u fududeeyo booqdayaasha, iyaga oo ku boorinaya inay ka tagaan dib-u-eegid kaddib marka la iibsado.
5. Sawirada Tayada
Marka dadku wax raadiyaan, waxay jecel yihiin inay sawirro ka arkaan. Google+ Local ayaa u oggolaanaya inuu isticmaalo ilaa toban sawir. Lahaanshaha sawirro badan oo lagu soo dhejiyey xisaabta ayaa fure u ah soo jiidashada macaamiisha badan. Iska hubi inaad sawirrada dhabta ah ka qaadatid dhismaha, labadaba iyo dibadaba. Si aad kuugu sawirto sawirada, booqo liiska maxaliga ah ee la abuuray, oo raadi xiriiriyaha akhriya "ku dar sawirada"
6. Kala-duwanaanta Website-ka
Qayb ka mid ah raadinta degaanka waa website-ka iyo waxa dadku sheegaan. Websaydhku waa inuu lahaadaa macluumaadka xiriirka, gaar ahaan lambarka telefoonka. Faa'iidada dheeraadka ah waxaa weeye in lagu daro ereyada muhiimka ah ee maxaliga ah meel kasta oo suurtagal ah kadibna ku dhaji iyaga iyaga oo abuuraya udubdhexaad u gaar ah dadka dhageystayaasha ah Xidhiidhada ayaa la sameeya dhagaystayaasha maxalliga ahi waxay go'aaminayaan haddii ay soo celinayaan booqashooyinka.